भिडियो – Page 515 – Etajakhabar
अन्तरवार्तामै ऋषि धमलाले लालबाबु राउतको राजिनामा मागेपछि हङ्गामा
काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यतिबेला चर्चामा छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको बेला आफ्नो देशको गुनासो विदेशी प्रधानमन्त्रीसाग गरेको भनेर आलोचना समेत खेपेका मुख्यमन्त्री राउतसँग चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले ठाडो प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा देशको निती मर्यादा र कुटनिती विपरित मुख्यमन्त्री राउत गएको भनेर आपत्ति जनाएका थिए । लाइभ कार...
काठमाडौँ । तरकारीवाली कुशुम श्रेष्ठ पछिल्लो समय फिल्म लम्फुका कारण चर्चामा छिन् । कुनै समय गोरखामा तरकारी बोकीरहेको अवस्थामा उनका तस्विरहरु भाइरल बनेपछि एकाएक चर्चामा आएकी उनलाई निर्देशक गोपाल चन्द्र लामिछानेले चलचित्रमा डेब्यू गराएका हुन् । चितवनमा कक्षा १२ अध्ययन गरिरहेकी सुन्दरी कुसुमसँग चलचित्रमा संजितले उनको अपोजिट रोलमा काम गरेका छन् । जुन कामले कुशुम र संजित दुवैले राम्रो प्रतिक्रि...
भाइरल ब्वाई ध्रुब बिककी आमा भन्छिन, ‘दिल्ली हाम्रा लागि बाजुरा बराबर छ तर काठमाडौँको छेउ हामी पुग्या छैनौ (भिडियो )
भक्तपुर : ११ वर्षको कलिलो उमेरमा आफु अध्ययन गर्ने विद्यालयको एक कार्यक्रममा गाउँदै गरेको भिडीयो भाइरल भएपछि ध्रुव बिकको निकै खोजी भैरहेको थियो। उनको प्रतिभाको कदर गर्दै र उनको प्रतिभा सबै माझ प्रस्तुत गराउन पिएनपिखबरडटकमको टिम ध्रुबको घर बाजुराको मार्तडी बजार पुगेको थियो। नेपालको प्रदेश नं. ७ को विकट क्षेत्र बाजुरामा टिनको छानोले छाएको एउटा सानो झुप्रो देख्दा मन सार्है नै कुडिएर आउँछ। ७ जनाको स...
उमेर बढ्दै गएपछी केटा केटीहरुलाई यस्तो किन हुन्छ ? हेर्नुहोस डाक्टर बैद्यको रोचक भनाई
किशोर अवस्था तथा किशोर अवस्था पार गर्दै गरेको समयमा मानिसमा अनेक खाले शारीरीक तथा मानशिक परीवर्तन हरु देखा पर्दछन । छिटो आवेगमा आउने, उत्तेजित हुने, प्रेममा पर्ने, कुलतमा फस्ने लगायतका कुराहरु यही बेला हुन सक्छन । उमेर बढ्दै गएपछी केटा केटीहरुमा आउने बिभिन्न परीवर्तनहरु, त्यसले निम्त्याउने खतरा र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा स्नायु, नशा तथा मानसिक रोग बिषेशज्ञ डा. लिपा बैद्यले निकै रोचक कुर...
काठमाडौँमै पाइन्छ हरेक सामान ६ सयमा, चीनबाट आएकी २० बर्षे युवती २० भन्दा बढी पसलकी मालिक
‘म सानै थिए। कक्षा ५ मा पढ्थे। घरमा सारै दु:ख थियो। एक छाक खान, राम्रो लगाउन समेत रहर हुन्थ्यो। मेरी आमाले हामीलाई धेरै दुख झेलेर हुर्काउनु भयो। घरको नाजुक अवस्थाको कारण आमा सधै रुनु हुन्थ्यो। आमाको रुवाई र घरको नाजुक अवस्थाले मैले पढ्न पाइन। १४ वर्षको उमेरमा म अरुको होटलमा भाडा माझ्ने काम गर्न थाले। ‘ बिगतका कुरा सम्झिएर गह भरी आशु पर्दै भनिन् चाइना भीबि क्लोथिङ्गकी सञ्चालिका पेम छोकी शेर्पाले। ...
सबिन र अनुको लुक्न नसकेको प्रेम कथा, अनुको गर्धनमा सबिनको नामको ट्याटु
काठाडौँ । नायक सबिन श्रेष्ठ र नायिका अनु शाहबिचको प्रेमसम्बन्धको चर्चा पछिल्लो समय ब्यापक भइरहेको छ । उनीहरुको प्रेमलाई लुक्न नसकेको प्रेमको संज्ञा पनि दिइएको छ । अनु र सबिनबिचको प्रेम सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सकिन्छ । अनुको इन्टाग्राममा अधिंकास तस्बिर सबिनका देखिन्छन् । सबिनले अनुको मुक्त कण्डठले प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन् । तर मिडियामा भने यी दुवै आफ्नो प्रेमसम्बन्ध स्वीकार गर्न चाहान्दैनन् । ...
नाक थुनेर बस्नुपर्ने बिर अस्पतालको धुर्मुस र सुन्तलीले गरे काया पलट, देख्नेहरु सबै हेरेको हेर्यै
काठमाडौं । एक साता देखि सुरु भएको बिर अस्पतालको सफाई अभियानले अस्पतालको काया पलट गरेको छ । मुलुककै जेठो अस्पताल वीरमा सफाइ अभियान सुरु भएको हो । सफाइ अभियान चलाइरहेका खेम शर्माको अगुवाईमा गत आइतबारदेखि बीर अस्पतालमा सफाइ अभियान सुरु भएको हो । खेम्स क्लिनिङ्गले थालेको एक महिने अभियानमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले सहयोग रहेको छ । सफाइ अभियानको शुभारम्भ गर्दै शर्मा र धुर्मुससँगै स्वास्थ्य राज्यमन्...
एक्कासी आएको आगोको मुस्लो सहितको लाभाले हेर्दा हेर्दै निल्यो मुस्ताङ गाडी, हेर्नुहोस् यो दुर्लभ भिडियो
एजेन्सी । आगोको मुस्लो सहित आएको लाभाले सिङ्गै मुस्ताङ गाडी निलेको छ । घटना हो अमेरिकास्थित हवाई राज्यमा पर्ने एक आइल्याण्डको भोलक्यानो । जहाँ एक्कासी विष्फोट हुँदा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षती पुगेको छ । जुन भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा ब्यापक रुपमा हेरिने भिडियो र दृश्यहरु मध्ये परेको छ । हवाई राज्यको खिलोवेया भोलक्यानो विष्फोट हुँदा यहाँका दुई दर्जन बढी घरहरु नष्ट पार्नुका साथै एउटा फोर्ड म...
‘तन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको तन’ गाएर रातारात चर्चा कमाएका अशोक अब केही समयका लागी गीत नगाउनेगरी घर जाँदा जे देखियो
उर्लाबारी । पछिल्लो समय चर्चामा रहेका बालगायक अशोक दर्जीले घर फर्कदा परिवारका लागी कोशेली लिएर फर्कने बताएका छन् ।अशोकको पहिलो गीत “तन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको तन” यतिबेला युटुब ट्रेडिङको १ नम्बरमा रहेको छ । गीत रिलिजका लागी केहि दिन अघि काठमाडौं गएका अशोक हिजो मात्रै आफु पढ्ने होस्टेल फर्केका हुन् । चन्चले स्वभावका अशोकले परिवारका लागी कुखुरा, चामल, नुन तेल लिएर घर जाने बताए । आफ्ना फयान्ह...
ऋषि धमलाको नाममा बन्यो नेपाली गित : “हमला हमला छोड हमला, नचिन्ने त को होला ऋषि धमला” भन्ने गीतमा ऋषि पनि आफै नाच्न पुगे (भिडियोसहित)
काठमाडौ - ऋषी धमला रिर्पोटस क्लबका अध्यक्ष र पत्रकारको परिचय मात्रैमा सिमित छैनन् । उनी एक सेलिव्रेटी पनि हुन् । निरन्तर उही रफतारमा खटने सक्ने धमला जति अरु सायद नेपालमा कोही पत्रकार छैनन् । बिहान ५ बजे देखी बेलुका ११ बजेसम्म समाचारका लागि उनी निरन्तर खटिरहेका हुन्छन, अरु पत्रकारका लागि सवैभन्दा लोभलाग्दो पक्ष पनि यही नै हो । रिर्पोटस क्लब, बाणी बहस, न्युज २४, हिमालय टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन...
Previous 1 … 514 515 516 … 639 Next
-19684 second ago
-18647 second ago
-17589 second ago
-14892 second ago
-14107 second ago
-11751 second ago